स्टुडियोमै कुटिए ऋषि धमला, रामधुलाई गर्ने अतिथि को हुन् ? — Imandarmedia.com
काठमाडौ। चर्चित पत्रकार ऋषि धमला स्टुडियोमै कुटिएका छन्। अतिथिका रुपमा कार्यक्रममा बोलाइएको एक अतिथिले उनलाई कुटेका हुन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन मार्फत प्रसारित कार्यक्रममा धमलालाई लछार पछार गरिएको छ। जनता जान्न चाहान्छ’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलामाथि नै लछारपछार गरिएको हो।
यो पनि, तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकविरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्न सर्वाेच्चको आदेश: प्रहरी गोलीबाट एक व्यक्तिको मृत्यु भएको घटनामा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध सात दिनभित्र जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज रहेका सर्लाहीका कुमार पौडेलको विवादास्पद ‘इन्काउन्टर’ घटनामा न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।
मृतककी आमा दुर्गादेवी पौडेलले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै १२ असोजमा अदालतको यस्तो आदेश आएको हो । यसअघि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेको थिएन । सर्लाहीको प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासबाट भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘..यो आदेशको सूचना प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफूसमक्ष प्राप्त भएको निवेदिकाको जाहेरी दर्खास्त जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रोहवरमा निवेदिकाबाट सनाखत गराउने उपयुक्त व्यवस्था मिलाई ऐ. ऐनको अनुसूची ६ बमोजिमको भरपाइ निवेदिकालाई उपलब्ध गराई यथाशीघ्र यस अदालतलाई जानकारी गराउनू भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सर्लाहीलाई लेखी पठाई जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार इजलाससमक्ष पेस गर्नुहोला ।’
कुमार पौडेल: मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४(३)(क) अनुसार सनाखत हुन नसकेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले घटनाका वेला गृहमन्त्री रहेका थापा र प्रहरी प्रमुख खनालविरुद्ध जाहेरी लिन मानेको थिएन । ऐनको दफा ४ मा कुनै घटना वा कसुर कसैले गरेमा यसको मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
रिट दर्ता भएको तेस्रो दिन नै १५ मंसिरमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ झिकाउने आदेश गरेको थियो । लिखित जवाफमा उजुरीको सनाखत हुन नसकेको प्रहरी कार्यालयले जनाएको थियो । यसैगरी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि लिखित जवाफमा हुलाकबाट प्राप्त निवेदनमाथि के कस्तो कारबाही भएको हो, खुलाउन सकेको थिएन ।
५ असार २०७६ मा पौडेलको प्रहरी गोलीबाट मृत्यु भएको थियो । उनलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले हत्या गरेको पौडेल परिवारको भनाई छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत इन्कान्टर नभई हत्या भएको भन्दै त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न प्रहरीविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा तथा आदेश दिनेलाई विभागीय कारबाही गर्न दुई वर्षअघि नै सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
गोली प्रहारमा संलग्न इन्स्पेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साह र हवल्दारद्वय विनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । जून सिफारिस अझै कार्यान्वायन हुन सकेको छैन। ४ कात्तिक २०७६ मा आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको थियो। स्थलगत छानबिन र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको बयानपछि पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर नौ गोली हानी हत्या गरिएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो ।
घटनामा दोहोरो मुठभेड नभएको र आत्मरक्षाका लागि गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासमेत नरहेकोमा उनीहरूले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई नौ गोली हानेर हत्या गरेको आयोगको प्रतिवेदमा उल्लेख छ। तत्कालिन महानिरीक्षक खनालले बिशेष टोलीका रुपमा पठाएका प्रहरीले पौडेललाई गोली हानेका थिए।
यसैगरि , ग्लोबल आईएमई बैङ्कको भित्री कुरा थाहा पाएपछि लगानीकर्ताहरूले भकाभक सेयर बेच्न थालेका छन्। राम्रो प्रतिफल दिन्छ कि भनेर लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले भकाभक आफ्नो नामको सेयर बेच्न थालेका हुन्। त्यो पनि संस्थापक लगानीकर्ताहरूले नै सेयर बेच्न थालेपछि दोस्रो बजारका लगानीकर्ता पनि झस्किएका छन् ।
जनता बैङ्कसँग मर्जर गर्दा जति चार्मिङ थियो, त्यो ह्वात्तै घटपछि लगानीकर्ता त्रसित भएका हुन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो बैङ्क बन्न रातारात मर्जरमा गएको ग्लोबल आईएमई बैङ्कले सोचेजस्तो प्रगति गर्न नसकेपछि सेयर बेच्नुको विकल्प नभएको एक लगानीकर्ता बताए । ‘राम्रो प्रतिफलको आशा थियो । त्यो प्राप्त गर्न सकिएन ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती लगानीकर्ताले भने, ‘झन् झन् सेवा र प्रतिफल खस्किँदै गएपछि लगानी फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुगियो। बैङ्कका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले व्यवस्थापनका कर्मचारीलाई अनावश्यक प्रेसर दिएर कानुन विपरीत थुप्रै काम गर्न लगाएको भन्दै बैङ्कमा जति वेला पनि समस्या आउने उनको भनाई छ। ‘कानुनले बन्देज लगाएको ठाउँमा पनि लगानी गर्न पठाएको छ।
बाफियाको पुरै खिल्ली उडाएको छ। मौद्रिक नीति कुन चराको नाम हो बैङ्कलाई थाहै छैन। उनले भने ‘नियामक निकाय पनि निकम्बा बनेपछि कसको के लाग्दो रहेछ र। अहिले गरेको अपराध कर्मका कारण कुनै समय बैङ्कका अध्यक्षलाई कारागारमा भेट्नलाई जान पर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्ने उनको विश्लेषण छ।
बैङ्कका अध्यक्ष ढकालले उद्योग वाणिज्य महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेपछि अरू सञ्चालकलाई समेत अटेरी गरेर आफूखुसी निर्णय लाद्न खोजेको आरोप एक सञ्चालक समिति सदस्यले लगाए। ‘व्यवस्थापकलाई बारम्बार धम्की दिएको छ । केही समस्या आए माथिबाट मिलाउँछु, तपाईँहरू भनेको गर्नुहोस् भन्दै प्रेसर दिएको छ।
उनले भने, ‘कहिले कार्यकाल सकिन्छ र बाहिरिन्छु जस्तो भएको छ । राजीनामा दिएर जाँदा पनि हुन्थ्यो, तर समाजले असक्षम भन्छ कि भन्ने पीरले बसेको छु। पुँजीका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो बैङ्क भए पनि सर्भिस र प्रतिफलका हिसाबले पुछारमा पुगेको भन्दै ग्लोबलबाट बाहिरिँदा बुद्धिमानी हुने लगानीकर्ताको भनाई छ।
बैङ्कले अलिकति भएपछि प्रगति गर्ला कि भनेर बसेका संस्थापक लगानीकर्ता बैङ्कको हालत देखेपछि दिक्क भएर सेयर लिलाम गर्ने तहको अवस्थामा पुगेका छन्। बैङ्कलाई आफ्नो नामको सेयर लिलाम गरिदिन निवेदनसमेत दिएको उनीहरूको भनाई छ।
उसो त बैङ्कले पनि संस्थापक सेयर धनीबाट आफ्नो नामको सेयर बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै निवेदन दिएको स्वीकारेको छ। बैङ्कको दोस्रो बजारमा संस्थापक सेयर मूल्य सोमबारसम्म 162 रुपैयाँ रहेको छ।